Deepin Linux 20.2.2 inosvitsa chitoro chitsva chinotsigira maapplication eApple | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura, mushure mekuziviswa kweWindows 11 uye rutsigiro rwayo rwekushandisa kweApple, ndakaverenga chirevo chakati Linux inofanira kuita zvakafanana. Ini ndinobvuma, muchidimbu, nekuti ini ndoda kukwanisa kushandisa maAppleapp paLinux nenzira yakapusa, asi "Linux" inzira uye mapurojekiti akasiyana anoita seasingabvumirani kuzadzisa icho chinangwa. Hongu, kune zvikwata zvevagadziri vari kuzviita, senge Ubuntu Web, JingOS kana, munguva pfupi yapfuura, maChinese kumashure kwavo. Yakadzika Linux 20.2.2 , que vaparura nhasi.
Ini, uyo asiri kutevera kuvandudzwa kweDelin Linux zvakanyanya, kupfuura kuvatevera paTwitter, ini ndazoziva nezve idzi nhau nekuverenga iyo yepakati 9ku5Linux. Pasina nguva vakakwanisa kubata pfungwa dzangu, zvaingove zvakakodzera kuisa mazwi "Tsigiro yeApple" kurangarira, semuenzaniso, kuti hapana vakadzikama Twitter vatengi (kwete ini) yeLinux kana sevhisi isiri kushandiswa kubva kubhurawuza.
1 Deepin Linux 20.2.2 ndeyeChinese mavambo
Deepin Linux 20.2.2 ndeyeChinese mavambo
Kuti ndinyore ichi chinyorwa ini ndaida kuzvionera ichi chitoro cheapp. Ndakazviita muGNOME Mabhokisi, kubva kwazvisina kunditendera kuti nditange Live Session. Nekudaro, nekuziva kuti iyo GNOME bhokisi kuiswa kuri kukurumidza, ini ndaisa iyo sisitimu yekuyedza iyo zvishoma, iyo iyo a 64GB zvishoma.
Uye, zvakanaka, handingati ndakatambisa nguva yangu neizvi, nekuti kumisikidzwa kwakaitwa pandakanga ndichinyora chinyorwa, asi zvave zvakada kudaro. Kana system yacho yaiswa, ini ndaona kuti Spanish yavanoshandisa iri "isinganzwisisike", zvekuti pane zvinhu zvinoonekwa muchiPutukezi. Uye chitoro chiri muChinese, saka ini ndanga ndisingade kuenderera kuyedza, uye zvishoma kana ndisingatsvage ruzivo rwepamutemo rwekuti ungaisa sei maapplication eApple muLinux Linux 20.2.2. Hongu ndinogona kutaura kuti maAPK haana kuiswa kubva kuchitoro chitsva, uye hapana maapplication eApple anoonekwa mukutsvaga. Iyo adb package haina kuisirwa chero, saka iyo Anbox -style terminal kuisirwa hakuwanikwe futi.
Mushure mekutarisa zviri pamusoro, isu tinofanirwa kutaura nezvenhau idzo Deepin Linux 20.2.2 inosanganisira:
Icho chataurwa pamusoro apa chitoro chetsva nerutsigiro rwekuisa maapplication eApple, kana saka zvavanodaro. Batch zvishandiso zvinogona zvakare kuiswa uye dhizaini yakagadziridzwa.
Tsigiro yeKachengeteka Boot.
Sarudzo nyowani yekusarudza iyo kernel yekushandisa kubva kune maviri anowanikwa. Parizvino unogona kushandisa Linux 5.10 LTS kana Linux 5.12.
DDE (Deepin Desktop Nharaunda) yakagadziridzwa. Ikozvino inotsigira akati wandei biometric yekusimbisa masisitimu, inosanganisira nyowani yekukiya skrini uye yakagadziriswazve nzvimbo yekutonga, iyo maneja wefaira inotsigira screensavers uye bhurawuza inosanganisira itsva yekuwedzera
Kugadziriswa kwakawanda mumashandisirwo akadai seMumhanzi, pikicha album, muoni wemifananidzo kana tsamba.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha pasi Deepin Linux 20.2.2 kubva Iyi link. Kushandisa chete Dde, kune dzimwe sarudzo dzinoita sedziri nani kwandiri, senge Manjaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Deepin Linux 20.2.2 inosvitsa nyowani software chitoro inotsigira Android maapplication ... kana saka ivo vanoti
Kutenda ketsamba, uninstall Deepin, pakanga pasina nzira neNvidia geforce board driver, iyo imwe linux distro yakangoitora chete kusanganisira Manjaro, kwaziso